चन्द्रमणि भट्टराई | २०७५-०३-०३ | १७०१ ५२
अशक्तलाई घरमै गएर महानगर भत्ता र स्वास्थ्य परीक्षण
काठमाडौं । साहित्यकार तारानाथ शर्मा आइतबार विहान १० नबज्दै श्रीमतिका साथमा महानगरको वडा नं. ६ कार्यालय परिसरमा देखिनुभयो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ सरस्वतीनगरका स्थायी बासिन्दा शर्मा वडामा पुग्दा रसिक भाषामा कुराकानी गरिरहनु भएको थियो । ८४ बर्षमा हिँडिरहनुभएका शर्मा वडामा पुग्नुको कारण थियो — महानगर विशेष भत्ता बुझ्नु र निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गराउनु । त्यस अवसरमा वडाध्यक्ष दीपेन्द्र लामाले सोध्नुभयो — हजुरलाई केही समस्या त छैन नि? वडाध्यक्षको प्रश्न भुइँमा झर्न नपाउँदै शर्माले भन्नुभयो — छ । यस प्रकार अनपेक्षित उत्तर सुनेर वडाध्यक्षले भन्नुभयो — के समस्या छ? साहित्यकार शर्माले ठट््यौली पारामा उत्तर दिनुभयो, वडामा बोलाउनुहुन्छ । आउनु प¥यो । वडाको सेवा घरमै पु¥याउन मिल्दैन । साहित्यकार शर्माको कटाक्षपूर्ण उत्तर सुनेर वडाध्यक्ष केवल मुस्कुराउनु मात्र भयो । सोही अवसरमा गराइएको स्वास्थ्य परीक्षणमा शर्माका कुनै समस्या देखिएनन् । उहाँ आफैं भन्दै हुनुहुन्थ्यो — सुगरको औषधि अमेरिकादेखि नै खान शुरु गरेको हुँ । अरु केही पनि छैन । श्रवण क्षमताका लागि उहाँलाई कुराकानीमा श्रीमतिले साथ दिइरहनु भएको थियो ।
शर्मासँगै वडाले आइतबार ७५ बर्ष पूरा गरेका महिला र ८० बर्ष उमेर पुरुषको निुशल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराएर महानगर विशेष भत्ता दियो । वडामा यस समूहमा १७३ जना जेष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ । आज छुटेका जेष्ठ नागरिकलाई भोलि वडामा बोलाइएको छ । उहाँहरु भोलि आउनुहुन्छ । शारीरिक अशक्तता वा अन्य कुनै कारणले कोही वडामा आउन सक्नुभएन भने हामी घरमै गएर भत्ता दिन्छौं । स्वास्थ्यकर्मीसँग लिएर गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिन्छौं । वडाध्यक्ष लामाले योजना सुनाउनुभयो ।
सवै जेष्ठ नागरिक भत्ता लिन समयमा जाँदैनन्
वडा नंं ६ मा पहिलो चौमासिकमा ५७७ जना जेष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिए । यो संख्या दोश्रो चौमासिकमा आउँदा बढेर ५९२ पुग्यो । यीमध्ये दलित जेष्ठ नागरिकले भने नियमित भत्ता लिएका छन् । अर्थात् पहिलो चौमासिकमा भत्ता बुझ्ने ७ जनाले दोश्रो चौमासिकमा पनि बुझे । एकल महिलातर्फ पहिलो चौमासिकमा ३७९ जनाले भत्ता बुझेकोमा दोश्रो चौमासिकमा आउँदा घटेर ३६१ जना पुग्यो । पूर्ण अपाङ्गतर्फ पहिलो र दोश्रो चौमासिकमा ६÷६ जनाले भत्ता बुझे भने आंशिक अपाङ्गतातर्फ दुवै चौमासिकमा १३÷१३ जनाले भत्ता बुझेको लेखापाल नरबहादुर साउदले जानकारी दिनुभयो । भत्ता बुझ्ने नागरिकको संख्या किन तलमाथि भनेर लेखापाललाई सोधिएको प्रश्नमा उत्तर दिँदै साउद भन्नुहुन्छ — स्वास्थ्य अवस्था, मृत्यु भएको अवस्था वा अन्य कुनै कारण समयमा व्यक्ति उपस्थित हुन नसक्ने हुन्छ । कसैले चौमासिकमा भत्ता लिनुहुन्छ भने कत्तिले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा एकै पटक लिनुहुन्छ ।
वडाले सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ पहिलो चौमासिकमा ६३ लाख ७ हजार २ सय रुपैयाँ र दोश्रो चौमासिकमा ६७ लाख ७३ हजार २ सय रुपैयाँ बैङ्क दाखिला गरेको थियो । तेश्रो चौमासिकका लागि ७१ लाख ५५ हजार २ सय रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।
Social Security and Urban Health
महानगरको तेश्रो अधिवेशनमा मेयर शाक्यबाट १९१ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत Previous Post
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा , केरुङ–काठमाडौं , काठमाडौं – पोखरा रेल परियोजनाका सम्बन्धमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर अघि बढ्ने समझदारी हुने Next Post